Life Good The Kitaabka — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
"Sanado, Waxaan samaynaya music adag views our dunida oo dhibcood si ay Masiixa – laakiin waxaa mar walba waa ay ka liidato si music, maxaa yeelay, waxaa jira oo kaliya si aad aad ula xiriiri karaa song a,"Ayaa sheegay in Trip. "Album The siiyey dhagaystayaasha snapshots nolosha wanaagsan, kitaabkana waxay noqon doontaa sida buug ka hadlaya sida loo nool yihiin. Waxaan ku tukanayeen in buuggan uu kaa caawin doontaa akhristaha in leexiyo ka been oo waad noolaan doontaa habka aan u abuurmeen in ay ku noolaadaan. "
By isticmaalaya Kurtumm shakhsi ee uu noloshiisa u gaar ah, Trip baadhayaa been ah in ayaa loo sheegay, iyo midabeeyo cusub a, sawir kitaabiga ah nolosha wanaagsan. Baadhitaanka oo dhan farxad nolosha oo ay ku jiraan, guul, iyo anshax iftiinka runta ah Ilaah Good The Life qeexaa sida ereyga aan ku nool si aad naftaada uga farxiyo laakiin nool rumaysadka Ilaah wanaagsan.
"Nolosha wanaagsan aan la koro si sare ee sallaan shirkadaha, Nolosha wanaagsan ma aha nolol xor ka ah masuuliyad kasta,"Ayaa sheegay in Trip. "Nolosha wanaagsan soo bixin waa nool u hagaagsan, Ilaah iyo isku duubay in uu leeyahay in ay na bixiyaan dhammaan Masiixa loogu wada."
No cusub goobta Christian ah music, Trip ee album ugu horeeyay, Hadday ogyihiin, dhuftay dukaamada dalka oo dhawr maalmood ka dib markii uu ka qalin jabiyay dugsiga sare. Oo sannaddaas isla, uu sidoo kale kasoo muuqday on Dove ee Award-magacaabay, classic Xisbiyada Mucaaradku "Ciise Muzik" la saaxiibkiisa calaamad Lecrae. Trip ee album taageero arday,20/20, la sii daayey ee 2008 iyo urursaday ayaa guulo badan: jabiyay galay Top boor ah 200, gaarey #11 on albums boor Christian ah shaxda iyo degtey at #4 on shaxda Injiil. Iyada oo uu album studio saddexaad, Inta u dhaxaysa Laba Caalamka, Trip bixiyeen a collection of shakhi ku saabsan nolosha adduun dhacay. shakhi Kuwa noqnoqonayey dhegeystayaasha sida B2W soo baxay at #1 on gooldhalinta Christian iyo Injiil boor, #5 on hip ah / shaxda Rap iTunes iyo #9 on the Qaasaali Top shaxda iTunes. album ayaa sidoo kale helay laba magacaabidda Dove iyo Award Xiddigle ah Best Injiil Rap / Hip Hop Album Sanadka.
sii daayo album ugu dambeeyay ee Safarka, Life The Good soo baxay at #2 labada on Hop gooldhalinta guud iyo Hip iTunes halka raadsanayaa ah #3 meel on shaxda hip hop boor ee, caga at #17 on Top ah 200 shaxda boor iyo qaadashada ah #1 Afyare ku shaxda Christian iyo Injiil boor.
Safarka ayaa u safray dunida fulinta kumanaan dhagaystayaasha. In lala Life The Good, Trip hadda waa on a safar dalka oo dhiirrigelin iyo la ah kasoo muuqan doona artist ee kala duwan 2012 ciidaha oo ay ku jiraan Ruuxa West Coast, Atlanta Fest iyo Rock The Harooyinka, iyo kuwo kale.
In ka badan 115 sano, Moody daabacday ayaa daabacay Aamin, wax dhab ah in diiradda saarayaa arrimaha ugu muhiimsan ee nolosha. Waxay sii wadaan in ay la kulmaan baahida sii kordhaysa iyo isbedelka suuqa la soo saarka ugu tayada sareeya, iyada oo buugaag daabacan dhaqan, iyada oo maqal iyo video waxyaabaha, oo hadda iyada oo e-buugaagta elektarooniga ah akhristayaasha xulo. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo http://www.moodypublishers.com/.
About Records Reach iyo ReachLife Wasaaradaha
Oo gaaray Records iyo ReachLife Wasaaradaha ku dadaalaan in ay, "Farqiga u dhexeeya runta Kitaabka Qudduuska ah iyo macnaha guud ee magaalooyinka." Aasaasay sannadkii 2003, Reach Records waa rikoor music calaamadda a Christian ka go'an in ay la isticmaalayo music iyada oo loo adeegsanayo gaarey bulshada reer magaalka hab kitaabku codka. Iyadoo Reach Records shaqeeya music inuu u muujiyo runta Kitaabka Qudduuska ah, ReachLife Wasaaradaha looga golleeyahay in lagu xoojiyo madaxda wasaarada kula music si ay u koraan kiniisadda reer magaalka.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo liis ah dhacdooyinka soo socda Records Reach iyo ReachLife Wasaaradaha, fadlan booqo http://reachrecords.com. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ReachLife fadlan booqo http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • August 19, 2013 at 8:51 waxaan ahay • Reply
walaalkiis Peace qoyska dhan ka maqsuuday aad artistry iyo sidii Rabbigu waa idin la isticmaalayo. No dambiga laakiin qaar ka mid ah bulshada oo mu'miniinta ah ayaa maqlay warar sheegaya in aad tahay a “fuundi” oo la illuminati ah. Anigu waxba ma aan isku dayaya in ay faafin dhaleeceynta, kaliya mahad lahaa haddii aad taas ka qaban karin. At meel aan ku jira nolosha waxaa jira sino si aad xagga ruuxa ka socda iyo kiristaan ​​been habaabin dadka, waxaad fadlan ka dhigi kartaa qoraal ah oo sidaas dadka ogaan kartaa waxa ilaa. Qaar ka mid ah asxaabtiisa calaamad aad u muuqdaan in ay la biligleynaya calaamadaha jooggo halkaa ku videos. Waxaan Rabbiga ku yimid ka dib markii sano ee weedhu iyo OGTAHAY in badan oo ka mid ah waxa ay tahay in kaniisadda waa ka Shaydaan. i ma kala garan in aad ka, laakiin waxaan oo dhan waxay u baahan yihiin in ay lacag la'aan ah Dhoob. Fadlan qaado dembi lahayn tan waxaa ka yimid meel jacaylka iyo walaac.
Sister in Masiix
Michael Glaze • August 19, 2013 at 8:52 waxaan ahay • Reply
Awesome! Waa in aad u soo baxaan inay Moody Bible Institute – Spokane, waayo, riwaayad saamaxaad! :)